yogesh bhattarai – Karnalisandesh
एक्लाएक्लै चुनाव लडे एमाले पहिलो बन्छ: योगेश भट्टराई
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका छन्। आज मकवानपुरको मनहरीमा आयोजित एमाले गाउँ कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रममा नेता भट्टराईले विभाजनले एमालेलाई खासै असर नगरेको उल्लेख गरे। उनले एमालेबाट केही समूह चोइटिएर गएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्दा पनि नसकेको बताए। पार्टी नफुटाउन गरेको अनुनय नेता मा
यि १० नेतालाई बाबुरामको प्रश्न: चुनावचिन्ह नै पार्टी हो र ? खै चेत?
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुध्रन्छन् र गोरु ब्याउँछ भन्‍नु उस्तै उस्तै भएको बताएका छन्। डा.भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई ब्यंग्य गर्दै ओली सुध्रन्छन् र गोरू ब्याउँछ भनेर आश गर्नु उस्तै उस्तै हैन र ? भन्दै व्यंग्यात्मक प्रश्न गरेका हुन्। उनले दोस्रो पुस्
एमालेको तेस्रो धार एमालेमै विलीन
काठमाडौँ। एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक (२०७७ पुस ५) संसद विघटन गर्दादेखि नै उनको चर्को आलोचना गर्दै आएका एमालेका १० जना नेता अन्ततः एमालेमै रहने भएका छन्। २३ फागुन २०७६ को अदालतको आदेशपछि पुरानै अर्थात २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किको एमाले फागुन २८ गतेको एकलौटी निर्णयबाट विवादग्रस्त बनेको थियो। यसअघि एमाले विभाजन हुँदा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल
काठमाडौँ। नेकपा एमालेले आगामी मंसिर १० देखि पार्टीको १०औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार तुल्सीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए। यस्तै एमालेले विधान अधिवेशन असोज ४, ५ र ६ गते गर्नेछ। बैठकमा माधव नेपाल पक्ष भनेर चिनिएपछि नेपालले पार्टी फुटाउँद
ओली र तेस्रो धारका नेताबीच १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति
काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तेस्रो धारका नेताहरूबीच १० बुँदेको कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। अध्यक्ष ओलीको निवासमा सोमबार भएको छलफलमा यसअघि कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएको हो। २०७५ जेठ २ को अवस्थाको एमाले स्थायी समिति बैठक बस्ने र त्यसैअनुरुप अघि बढ्ने सहमति भएको एमाले सचिव गोर्कण विष्टले जानकारी दिइका छन्। बिष्टले १०
मध्यमार्गी नेतालाई पनि एमालेमा राख्न चाहाँदैनन् ओली
काठमाडौँ। एमालेभित्रको विवाद नमिलेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नयाँ दल गठन गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यमार्गी नेताहरूलाई पनि पार्टीभित्र ल्याउने चाहेका छैनन्। नेपाल पक्षका रहेका तर पार्टी विभाजन गर्न नहुने नेताहरूलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले असार २७ गते गरेको १० बुँदे कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि ल्याउन नचाहेका हुन्। ‘ओलीले अक्षरस १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिएन, पार्टी मिलाउ
एमालेको तेस्रो धारमा ५७ जना
काठमाडौँ। नेकपा एमाले तेश्रो धारको भेलाले विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा पार्टी एकता अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित भेलाले सो निष्कर्ष निकालेको हो। भेलापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा एमालेमा विभाजनको सकट आइलागेको बताउँदै थप विभाजन र विनाशको दिशातर्फ धकेलिनबाट पार्टीलाई जोगाउने चुनौती अगाडि आएको बताइएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अब नेकपा
एमालेमा जन्मियो तेस्रो धार
काठमाडौँ। औपचारिक विभाजनमै पुगिसकेको नेकपा एमालेमा बिहीबारदेखि तेस्रो धारको जन्म भएको छ। तेस्रो धारका ९ जना नेताहरुले विहीबार राति अबेरसम्म बैठक गरेर विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरुले शुक्रबार आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग थप छलफल गरेर लाइन स्पष्ट पार्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। माधव नेपालले बुधबार नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी बनाएर निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिएपछि उनलाई सा
‘१० बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा एमाले विभाजन भयो’
काठमाडौँ। माधव नेपाल मानिने नेकपा एमालेका ९ जना नेताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पार्टी फुटेको निष्कर्ष निकालेका छन्। बिहिबार राति संयुक्त विज्ञप्तिमा उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई रहेका छन्। त्यस्तै स्थायि कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन्। ​ ९ जना ने